बढ्यो अमेरिकी डलर, युएइ दिराम र मलेसियन रिँगिटको भाउ, हेर्नुहोस् अन्य देशको कति पुग्यो ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/बढ्यो अमेरिकी डलर, युएइ दिराम र मलेसियन रिँगिटको भाउ, हेर्नुहोस् अन्य देशको कति पुग्यो ?
काठमाडौ, असार २७ -आज नेपाली बजामा शनिबार अमेरिकी डलर, युएइ दिराम तथा मलेसियन रिँगिटको विनिमयदर उकालो लागेको छ । त्यस्ते आज मेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ३ पैसा तथा बिक्रिदर १२० रुपैयाँ ६३ पैसामा झरेको छ।त्यस्तैगरी आज । साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ।
आज शनिबार युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५२ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको यस्तैगरी आज कुवेती दिनार एकको खरिददर ३८९ रुपैयाँ ८३ पैसा तथा बिक्रिदर ३९१ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ। आज असार २७ गते
मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ १३ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ६८ पैसा छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ।